Root Synephrine HCL Powder (5985-28-4) Soosaarayaasha - Phcoker
Rood Synephrine HCL budada (5985-28-4)
Budada loo yaqaan 'Synephrine HCL' waa dabiici dabiici ah oo kiimiko ah oo kiimiko ah oo laga helo dhir lana soo saaro si loogu daro supplement ..
Capacity: 1450kg / bishii
Qalabka Hilibka ah ee loo yaqaan "RH Synphrine HCL" (5985-28-4)
Qalabka Hilibka ee Roodhada HCL (5985-28-4)
Product Name Rood Synephrine budada HCL
Magaca Kiimikada Synephrine hydrochloride; 5985-28-4; 4- (1-Hydroxy-2- (methylamino) ethyl phenol, hydrochloride;
Fasalka Daroogada Fat ayaa lumay
Molecular Wsideed 203.666 g / mol
barafku Psaliid 147-150 ° C
Bar kulaylka 341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (est)
Application Takhasuska maaddooyinka dufanka leh ee ugu waxtarsan
Raw Synephrine hcl budada (5985-28-4) Sharaxaad
Raw Synephrine waa budada HCL waa kiimiko caadi ah oo kiimiko ah oo laga helo kiimikada oo laga helay dhirta oo loo soo saaro si loogu isticmaalo buuxinta. Synephrine waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa 'orange orange' sababtoo ah waxaa laga soo qaatay liisas yar. Xaqiiqda dhabta ah, waxaa dabiici ah laga helaa cirifka liinta, taas oo ah sababta loogu yaqaano sida orantada qadhaadh. Orange beryahan ah ayaa hadda loo isticmaalaa arrimo lamid ah oo la mid ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhibaatooyinka casriga ah ee maanta la mid ah miisaanka lumay iyo sida gargaarka ah ee la dagaallanka cagaha ciyaaraha fudud. waa mid ka mid ah xayawaanka ugu weyn ee liinta oranaya oo loo maleeyaa inuu yahay aasaaska tayada warshadda Raw Synephrine HCL, argagax leh maaddooyinka gubanaya ee ugu fiican. Xayawaanka waxaa laga helaa liimeyaal, markaad haysan karto waxay ka faa'iideysanayaan dhamaan siyaabo kala duwan.
Maaddaama ay ka kooban tahay cuntada dheeraadka ah, budada HCL ayaa laga yaabaa inay u badantahay inta badan koritaanka marka loo isticmaalo si habboon. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaalo saameyn xun oo khafiif ah oo ka dhexjira dadka isticmaala kuwaas oo qaadanaya qolka synephrine. Synephrine waa kicin, sidaas darteed waa muhiim in la bilaabo qiyaas yar oo lagu qiimeeyo dulqaad. Qalliinka HCL ee xad-dhaafka ah wuxuu keeni karaa in si deg-deg ah kor ugu kaco dhiig-karka, qallalka wadnaha, maqaarka maqaarka, fadhiga, degenaanshaha, kacsanaanta, dhibaatooyinka neef-mareenka, dawakhaad, madax-xanuun, murqaha, sonkorta dhiiga oo hoos u-dhacda iyo isku-dhafka sonkorta dhiigga, xanuunka caloosha, lallabada iyo shubanka, gaar ahaan la socda kiciyeyaasha kale.
Synephrine hcl budada (5985-28-4) Mashruuca Hawlaha
Dhibaatooyinka wadnaha iyo xididada ee ku dhaca laf-dhabarka waxay la xiriiraan dib-u-qaadista adrenergic. Guud ahaan, marka leysku xiro xayiraadaha α-adrenergic, xuubka xajinta ayaa dhacda, iyo marka la qabsanayo xarumaha xayiraadaha ah ee xinjirowga-adrenergic, qandhada wadnaha iyo kordhinta natiijada garaaca wadnaha. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in budhcadda hcl-ga ee xermiska ah ay ku xidhan tahay xayawaanka-adrenergic reseptors, taasoo keentay in korodhka awoodda jidhka ee jebinta dufanka. Xakamaynta xayawaanka β1-adrenergic ma saameyneyso xaddiga wadnaha ama cadaadiska dhiigga. Mar labaad, sababtoo ah synephrine waxay muujinaysaa wax yar ama aan ku xirneyn xakamaynta α3-, α3-, β1-, iyo β2-adrenergic reseptors iyo uma muuqato in ay qaadaan saameynta aan tooska ahayn ee adrenergic, saameynta wadnaha, sida kordhinta wadnaha garaaca iyo cadaadiska dhiigga waayo-aragnimooyinka qiyaasta la isticmaalo, oo ka duwan noocyo kale oo ah phenylethylamine iyo phenylpropanolamine derivatives. Isbeddelada dhismaha yaryar waxay keenaan kala duwanaansho weyn oo ku yimaada soo qaadashada adrenergic iyo kaddibna awooda lagu abuuro saameyno wadnaha.
Kiniiniga "Synephrine" wuxuu sidoo kale kordhiyaa isticmaalka jidhka ee karbohidraatka adigoo soo saaraya tamar badan ATP.49-52 Wuxuu fududeeyaa kor u qaadida gulukooska ee unugyada muruqyada, iyo sidoo kale glycogenolysis, gluconeogenesis, glycolysis, iyo oksijiin. Ku lug lahaanshaha calcium iyio iyo cAMP oo leh qaboojiyeyaasha adrenergic ayaa lagu muujiyey inay ku lug leeyihiin geeddi-socodka hab-dhaqameedkan, taas oo muujinaysa ka qayb-qaadashada habab badan.
Marka laga soo tago, isticmaalka budada sephromine ee Synephrine ayaa horjoogsanaya waxqabadka NF-kB. Maaddadani waxay fure u tahay in ay keento xanuunka inflammatory sida neefta. Isticmaalka kalluunka sunta "Synephrine" ayaa sidoo kale lagu ogaadey in uu saameeyo ficilka hoormoonka eotaxin-1 inta badan. Tani waxay ka hortagtaa dhaqdhaqaaqa eosinophil oo ah aag la yiraahdo.
Inkasta oo aan si fiican loo xaqiijin iyada oo loo marayo tijaabooyinka, isticmaalka budada hareeraha ee "Synephrine hcl" ayaa la ogaaday in la joojiyo tallaabada acetylcholinesterase. Kiimikadaan waxaa loo yaqaanaa inay keento cudurka Alzheimers.
Faa'iidooyinka ee Sefafiin hcl budada (5985-28-4)
Synephrine hcl miisaan khasaare ah
Synephrine hcl waxay caawiyaan cunto xumida
Synephrine hcl waxay kordhisaa guluukooska muruqa muruqa
Synephrine hcl waxay caawisaa qalabka glycogenesis
Cudurka macaanka ee 'hypothermia' wuxuu ka caawiyaa diabeteska
Synephrine hcl waxay hagaajinaysaa dheefshiidka
Synephrine hcl waxay yareyneysaa dareenka qalliinka ka hor
Synephrine hcl waxay hagaajinaysaa dabeecadaha iyo heerarka tamarta
Synephrine hcl waxay gacan ka geystaan ​​ilaalinta bakteeriyada waxyeellada leh
Synephrine hcl waxay caawisaa yaraynta xanuunka
Cinwaanka lagu taliyey hcl budada (5985-28-4)
Qiyaasta ugu badan ee la isticmaalo ee loo yaqaan 'Synephrine hcl' waa qiyaastii 100mg maalintii. Tan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qiyaasta ku filan ee lagu gaari karo miisaanka oo yaraada. Si kastaba ha noqotee, qadarka lagu taliyay ee xitaa dadka isticmaala xaaladaha aan ka badnayn waa 200mg maalintii. Wax kasta oo ka sarreeya calaamaddan ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin sun waxayna shakhsiyan u gelin doontaa halista inuu la kulmo dusha sare ee dhibaatooyinka soo raaga ee la xiriira kicinta isticmaalka. Waxaa lagugula talinayaa, inaad kubilaawdo, 10 ilaa 20mg si loo hubiyo in budada 'Synephrine hcl' ay si siman ula jaanqaadi karto jirkaaga. Ka dib markaad qaadato qiyaasta bilowga ah, waa inaad waqti qaadataa si aad u qiimeyso jawaabta jirka ee kaabista. Haddii wax walboo hagaagsan yihiin, qiyaasta labaad ee qiyaastii 20mg ah ayaa lagu dari karaa laba saacadood kadib. Marka laga soo tago, inta u dhexeysa qiyaasta ugu aaminsan ayaa qaadanaysa budada Synephrine hcl hal mar labadii saacadoodba mar.
Dhibaatooyinka ay keento ee Sefafiin hcl budada (5985-28-4)
Isticmaalka Synephrine waxaa sidoo kale weheliya waxyeelo sida daroogo kale oo dhan. Marka hal dawo lamaaneeyo isticmaalka synephrine hcl iyo kafeyn wadajir ah. sidoo kale wuxuu la yimaadaa waxyeellooyin qaarkood. Waxyaabaha soo socdaa waa qaar ka mid ah waxyeellooyinka soo noqnoqda:
Cadaadis dhiig oo sarreeya.
Wadne garaacsanaan la'aan.
Dhimashada haddii loo isticmaalo qiyaasta sare ee qaliinka ka hor.
Maqalka / maskaxda
Isku-buufinta iyo dhiig-xinjirowga
Dhibaatooyinka wadnaha oo wadnaha ah (fayruuska hurgumeysan)
Hoos u dhac ku yimaada xajmiga muruqa (rhabdomyolysis)
Kelyaha oo shaqo la'aan ah
Dhaawaca dareemayaasha waxaa sabab u ah cadaadiska kordhaya ee muruqyada (qaybta laf dhabarka ah)
Xanuunka laabta (angina angina)